Pyae Phyo (MMiTD): ♪ “စမတ်ဖုန်းတစ်လုံး ဘယ်လိုရွေးချယ်ဝယ်ယူမလဲ” ♫
လူဦးရေ ၅၄ သန်းခန့်ရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မိုဘိုင်းဖုန်းထိုးဖောက် ၀င်ရောက်မှုနှုန်းဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ဂဏန်းနှစ်လုံး ပြည့်လုပြည့်ခင်ရှိခဲ့ပြီး မနှစ်ကဆိုရင် ၅၀% နီးပါးရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက ဖုန်း အော်ပရေတာတွေ၏ အဆိုအရ မြန်မာ နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ ၈၀% လောက် ကပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပထမဆုံး ဟန်းဆက်တွေက စမတ်ဖုန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သုံးစွဲမှုများပြားလာ ခြင်းနှင့်အတူ မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲသူ များနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းများအတွင်းတွင် တရားမ၀င်မှောင်ခိုသွင်းထားသည့် မိုဘိုင်းဖုန်းများ သည် တစ်ဆတစ်ဆတိုးပွားလာလျက်ရှိပါတယ်။ တစ်ခါ တစ်ရံတွင် မှောင်ခိုရောင်းချသူများသည် ဖုန်းအသစ်များ ထက် ပြန်လည် ပြင်ဆင်ထားသည့် ဖုန်းများကို တရားမ၀င် ရောင်းချလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတစ်လုံးကိုဝယ်ယူတော့မယ်ဆို လျှင် သိထားသင့်တာလေးတွေကို လေ့လာကြည့်ကြ ရအောင်။ သေချာတာ ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ၀ယ်ယူမယ့်ဖုန်းရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ Show Room တွေ၊ စိတ်ချရတဲ့ဆိုင်ကြီးတွေမှာဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။
မိမိတို့ဝယ်ယူမယ့် ဖုန်းအမျိုးအစားနဲ့ တူညီတဲ့ဖုန်းက ကိုယ့်အသိမှာရှိလျှင် ယူသွားပြီးပုံစံကို တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါက အပြင်ပိုင်းပေါ့။ ဘာပစ္စည်းတွေသုံးထားလဲ၊ ဘယ်လို ပုံစံတည်ဆောက်ထားလဲ၊ အလေးချိန်၊ ရုပ်ထွက်စတာတွေကို တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ နှိုင်းယှဉ်လိုက်လျှင် တစ်ထပ် တည်းတော့ လုံးဝမကျနိုင်ပါဘူး။ သိသိ သာသာကွဲပြားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်ဘေးဘောင် ရဲ့နေရာယူမှု အထူအပါး၊ resolution ကင်မရာအရည်အသွေးတွေ သိသာစွာ ကွာနိုင် ပါတယ်။ Graphic အရည်အသွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး D-Day တို့ Contract Killer တို့လိုမျိုး ဂရပ်ဖစ်လိုအပ်ချက်မြင့်မားတဲ့ ဂိမ်းတွေတင်ကာ တစ်ပြိုင်နက်တည်းဖွင့်ထားကြည့်ပါက ဖုန်းအတုများ မှာ နှေးကွေးစွာ run မှာဖြစ်သလို hang သွားတာတွေဖြစ်မှာပါ။ အထူးသဖြင့် home ခလုတ်၊ power ခလုတ်နဲ့ volume ခလုတ် တွေက သိသာစွာ ကွာခြားလှပါတယ်။ iPhone Clone တွေဆိုလျှင် power ခလုတ်က သိသာစွာကွဲပြားတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ဘက်ထရီကာဗာကိုချွတ်ပြီး တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်ရင် အချို့သော အစိတ်အပိုင်းတွေ၊ နေရာချထားမှုတွေ (Sim card slot လိုမျိုး)က original နဲ့ ကွဲပြားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Battery specification တွေက ကွဲပြားနေတာတို့ဖြစ်မှာပါ။ နာမည်ကြီးဖုန်းများ နှင့် နာမည် ဆင်တူရိုးမှား၊ ပုံစံဆင်တူရိုးမှားဖုန်းတွေကလည်း များစွာထွက်ပေါ် နေသောကြောင့် အဆိုပါဖုန်းများကိုလည်း သတိ ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိတို့ရဲ့အဖိုးတန်တဲ့ငွေကြေးတွေက ဖုန်းအ၀ယ်မှားတဲ့အတွက် အလဟဿဆုံးရှုံးပြီး စိတ်သောက ရောက်စေမယ့်အဖြစ်မျိုးတွေ မကြုံရစေဖို့မိမိတို့အနေနဲ့ အသေအချာလေ့လာစစ်ဆေးပြီးမှ ၀ယ်ယူ သင့်ပါတယ်။ နောက်တစ် ချက်က မိမိတို့အနေဖြင့် ဖုန်းဝယ်လျှင် ဆိုင်မှာကတည်းက အားလုံးစစ်ဆေးပြီး လိုတာတွေအားလုံးလုပ်ခဲ့လျှင် ချို့ယွင်း အားနည်းချက်တွေရှိခဲ့ပါက ချက်ချင်းသိနိုင်မှာပါ။ ဥပမာ SIM ကတ်မိ၊ မမိ၊ Dual ဆိုလျှင် နှစ်ခုလုံးမိမမိ၊ microSD ကတ်မှာ ကတ်စိုက် ရမရ (အချို့ချောင်နေတတ်ပြီးမမိတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်)၊ ကင်မရာ အရည်အသွေး၊ Google Play သုံးလို့ရမရ၊ မိမိတို့များသောအားဖြင့် အသုံးပြုရမယ့် apps တွေတင်လို့ရမရ၊ မြန်မာစာရမရ၊ ဖုန်းခေါ်လျှင် အသံကြား မကြား (စပီကာ ပြဿနာဖြစ်တတ်ပါတယ်)စတဲ့ အခြေခံ လိုအပ်ချက်တွေကို ဆိုင်မှာတည်းက အသေအချာ စစ်ဆေးခဲ့သင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် လဲဆိုတော့ အဆိုပါပြဿနာလေးတွေက မကြာခဏကြုံတွေ့ နေကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေခံအချက်လေးတွေသိရှိထား လျှင် မိမိတို့အနေဖြင့် ဖုန်းအ၀ယ်မှားလို့ စိတ်သောကရောက်ရမယ့် အခြေ အနေမှ ရှောင်လွှဲနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
<Second ဈေးကွက်နဲ့အတူ တွင်ကျယ်လာတဲ Clone>
အများစုသော စမတ်ဖုန်းသုံးစွဲသူများက အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မိမိတို့ရဲ့ဖုန်းတွေကိုပြန်လည် ရောင်းချလေ့ရှိပါ တယ်။ မော်ဒယ်အမြင့် ကိုင်ချင်တာ၊ ငွေလိုတာ၊ လက်ရှိကိုင်နေတဲ့ဖုန်းကို ရိုးအီသွားပြီး နောက်ထပ် အသစ်တစ်လုံး ကိုင်ချင်တာ စတာတွေကြောင့် မိမိနဲ့နီးစပ်ရာ သူငယ်ချင်းတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အွန်လိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စမတ်ဖုန်း အဟောင်း ၀ယ်ရောင်းဆိုင်တွေ ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ရောင်းချလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ စမတ်ဖုန်းဝယ်ယူမယ့်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဈေးနှုန်း သက်သက် သာသာနဲ့ ၀ယ်ယူနိုင်တဲ့အတွက် စိတ်ဝင်စားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်တစ်ခုရှိတာက မိမိဝယ်ယူမယ့်ဖုန်းက အစစ်လားအတုလား (Genuine လား Clone လားပေါ့)သိရှိထားမယ်ဆိုလျှင်တော့ clone ၀ယ်ယူ မိတဲ့ပြဿနာကို ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ထို့အတူ ဖုန်းဆိုင်များမှာ ၀ယ်ရင်လည်း အတုလားအစစ်လားသိထားဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အများစုသောသူများအနေဖြင့် တော်ရုံတန်ရုံတော့ သိပ်နားလည်မှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ဈေးနှုန်းကိုကြည့်ပြီး သက်သာတယ်ဆိုတာနဲ့ဝယ်ယူ ကြမှာအမှန်ပါပဲ။ ကိုးစား ယုံကြည်ထိုက်သော ဆိုင်ကြီးတွေမှာတော့ clone တွေဝယ်ယူမိဖို့ အခွင့်အလမ်းသိပ်မရှိပေမယ့် အချို့သောဆိုင်တွေမှာ တော့ clone တွေကို ရောင်းနေကြပါတယ်။ Clone လို့ပြောရောင်းလျှင် ကိစ္စမရှိသော်လည်း အစစ်လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ရောင်းချမယ် ဆိုလျှင်တော့ ၀ယ်ယူမိသူတွေမှာ တော်တော်လေး နစ်နာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အများစုဖြစ် တတ်တာက နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင်မှုအားနည်း လှတဲ့လူကြီးတွေအနေနဲ့ clone ကို တကယ့်အစစ်ဖုန်းကဲ့သို့ ထင်ပြီး ၀ယ်ယူမိတာတွေရှိပါတယ်။ သူတို့ကတော့ တံဆိပ်နဲ့ပုံစံကိုပဲ သိတာ များတဲ့အတွက် အထက်ကဆိုခဲ့သလို အဟောင်းဈေးကွက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အချင်းချင်းပြန် ရောင်းတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် Clone ကိုဝယ်မိလျက်သား ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အချို့က သိသိနဲ့လိမ်ရောင်းတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ Clone ကို ငွေအရေးတကြီးလိုလို့ မရောင်းချင်ဘဲ ရောင်းချရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ သိပ်နားလည်တဲ့သူတွေကို ဈေးသက်သာစွာရောင်းချလေ့ရှိပါတယ်။ ၀ယ်ယူသူတွေကလည်း ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သက်သက်သာသာနဲ့ရမယ်ဆိုတော့ သိပ်မစဉ်းစားမိဘဲ ၀ယ်ယူမိတတ် ကြပါတယ်။
iPhone ကတော့ clone ဟုတ်မဟုတ်စစ်ရတာ လွယ်ပါတယ်။ iTunes App Store က iOS apps တွေတင်တဲ့အခါ ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Android ကို iOS ပုံစံပြောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့ဝယ် ယူမယ့်ဖုန်းရဲ့ specification ကို GSMArena (သို့မဟုတ်) Official website မှရယူကာ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ spec တွေကို third-party app တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Antutu Benchmark ကို Google Play မှ download လုပ်ကာရယူပြီး စစ်ဆေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဖုန်းရဲ့ ထုတ်လုပ် သူက အခြားနာမည်တစ်ခုကို ဖော်ပြနေတယ်ဆိုလျှင် အဲဒါဟာ clone ဆိုတာသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ IMEI code ကို စစ်ဆေး တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ iPhone မှာတော့ သူ့ရဲ့ Serial Number ကို Settings>General > About Phone ကနေ ရယူပြီး https://selfsolve. apple.com/agreement WarrantyDynamic.do သို့ ၀င်ကာစစ်ဆေး နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ iPhone က clone ဆိုလျင်တော့ “We’re sorry,but this serial number is not valid. Please check your information and try again,” ဆိုပြီးဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Android သုံးစွဲသူများအဖို့ IMEI code ကို handset ရဲ့နောက်ကျောဖက်မှာ ကပ်ထားတဲ့ sticker ကနေကြည့်နိုင်ပါတယ်။ မရှိဘူး ဆိုလျှင်တော့ Settings> About>Status ကနေရယူနိုင်သလို *#06# ကိုရိုက်ထည့် ကာ ဖုန်းခေါ်ပြီး IMEI code ကို ရယူနိုင်ပါတယ်။ IMEI code ကိုရရှိပါက အဆိုပါ code ကို imei.info သို့သွားပြီး box ထဲမှာရိုက်ထည့်ကာ “Check” ကိုနှိပ်ပြီး စစ်ဆေး နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါဖုန်းရဲ့ information တွေကိုပြသမှာဖြစ်ပြီး ကိုယ့် Handset နဲ့ အချက်အလက် တွေကွဲနေပါက clone ဆိုတာသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Samsung ဖုန်းတွေအတွက်ဆိုလျှင် Samsung Kies ဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲကို http:/ www.samsung.com/ph/support/ useful-software/KIES/ ကနေရယူပြီး သင့်ရဲ့ပီစီမှာတင်ကာ ဖုန်းကို USB နဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ အခါသင့် Samsung ဖုန်းရဲ့ Device Name တွေ၊ Firmware information တွေနဲ့ ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ specification တွေကိုပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ မိမိချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ device ကို ချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ not recognized ဖြစ်နေကာ နောက်ထပ် connect ထပ်လုပ်ခိုင်း တဲ့အခါ တွေမှာလည်း ချိတ်ဆက်လို့မရနိုင်သေးဘူးဆိုလျှင် အဲဒါက Samsung Galaxy ဖုန်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ပြသတာပဲဖြစ်ပါ တယ်။ ထို့ပြင် Galaxy device တွေမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ Samsung codes တွေကိုရိုက်ထည့်ပြီး ဖုန်းခေါ်ဆိုကာ စစ်ဆေးနိုင်ပါ သေးတယ်။ အသုံးများတဲ့ code အချို့ ကတော့ *#1234#[Display device current firmware],*#*# 1472365#*#* [GPS test settings],*#0*#[General Test Mode], *#*#197328640 #*#* [Service mode main menu] စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့က code တွေကို ရိုက်ထည့်ကာ dial လုပ်လိုက်လျှင် ကွင်းထဲမှာဖော်ပြထားသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို လုပ်ဆောင်သွား မှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ မရဘူးဆိုလျှင်တော့ Samsung မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ဖော်ပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
<IMEI code တွေရဲ့အကြောင်း>
IMEI code ဟာ ဂဏန်း ၁၅ လုံးပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ၃၅၈၈၉၃၀၅၇၄၇၀၃၂၃ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ နံပါတ် ၇ နဲ့ ၈ ခုမြောက် ဖော်ပြတဲ့ဂဏန်းများက ဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံများနဲ့ အရည်သွေးကို ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ အနှစ်ချုပ် မှတ်ထားလျှင်တော့ ၀၂ (သို့မဟုတ်) ၂၀ ဆိုလျှင် အရည်အသွေးနိမ့်၊ ၀၈ (သို့မဟုတ်) ၈၀ ဆိုလျှင် အရည် အသွေး အသင့်အတင့်၊ ၀၃(သို့မဟုတ်) ၃၀၊ (သို့မဟုတ်) ၄၀ဆိုလျှင် တရုတ် ပြည်မှာထုတ်တာဖြစ်ပြီး အရည်အသွေး ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ၀၆,၆၀ ဆိုလျှင်လည်း ဟောင်ကောင်၊ တရုတ်၊ မက္ကဆီကို စက်ရုံထုတ် များဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပါတယ်။ ၀၅,၀၁ (သို့မဟုတ်) ၅၀,၁၀ ဆိုလျှင် ဘရာဇီး၊ USA သို့မဟုတ် ဖင်လန်စက်ရုံထုတ်များဖြစ်ကာ အရည်အသွေးအလွန်ကောင်းမွန်ပါ တယ်။ ၀၀ ဆိုလျှင်တော့ မူရင်းစက်ရုံ ထုတ်ဖုန်းဖြစ်ကာ အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ၁၃ ဆိုလျှင် တော့ အရည် အသွေးအလွန်ညံ့ကာ ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အန္တရာယ် ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အထက်ပါအချက်များနဲ့စစ်ဆေးလို့ရနိုင်သလို လက်ရှိပြည်တွင်းမှာ တရားဝင်ဖြန့်ဖြူးနေတဲ့ စမတ်ဖုန်းတံဆိပ်များဟာ သူတို့တိုက်ရိုက် တင်သွင်းတဲ့စမတ်ဖုန်းများအတွက် Warranty ပေး လေ့ရှိပြီး ဖုန်းနဲ့အတူ အဆိုပါ warranty card သို့မဟုတ် ဟိုလိုဂရမ် အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ထား တာတွေပါဝင်မှာ ဖြစ်ပြီး အဆိုပါကတ်များက ဖုန်းအစစ်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။